Previous PDP NA-EKWU NA N242B BU IMEBI NTULI AKA 2019
Next BUHARI CHORO N242B MAKA NTULI AKA NKE 2019
Hot News, IHE N'EME N'OBODO, Local News
Ụlọ Ọrụ Nchekwa na Exchange (SEC) a dọrọ ndị Naijiria aka ná ntị ka ha ghara itinye aka na atụmatụ nke na-enyeghachi ndị na-enweghị ezi uche ma ọ bụrụ na ha anabataghi ọrụ ahụ. Executive Director General nke SEC, Nwanyị Mary Uduk mgbe ọ na-ekwu maka mmemme ugbu a iji mee ka ahịa gaa n’ihu otu nzuko Ụlọ Nzukọ Obodo nke dị na Port Harcourt, Rivers State, na Wednesday, kwuru na ndị na-emefu ego ga-enwe nchekasị maka ego ọ bụla a na-atụ aro maka nlọghachi nke dị elu.
Ponzi atụmatụ (ma ọ bụ Ponzi egwuregwu ma ọ bụ Ponzi) bụ ọrụ ego aghụghọ nke onye ọrụ, onye ọ bụla ma ọ bụ nzukọ, na-akwụghachi nye ndị na-etinye ego n’aka ndị na-emepụta ego site n’aka ndị ọhụrụ na-emepụta ego, kama iji nweta uru ha nwetara.
Dị ka ya si kwuo, ụdị azụmahịa ndị ahụ enweghi ụdị azụmahịa ọhụụ dịka nlọghachi ga-akwụ ụgwọ site n’aka ndị ọzọ na-etinye ego na-eme ka ọ bụrụ ihe ojoo na-emefu ego na-abaghị uru .Utu kwukwara na ọ bụrụgodị na ọrụ ahụ akwadoro ọrụ ndị ụlọ ọrụ ahụ, ndị nwere ego ga-enwerịrị ike ịhụ na ndị isi ego na a na-edeba ngwaahịa ha na-enye na SEC.
Onye isi ochichi SEC kwughachiri mkpebi nke oru ahu iji mee ka onu ogugu ndi mmadu nwekwuo uzo iji mee ka ndi oru uzo tinye aka na ahia. “Ndi ozo a bu ndi amuma ugha nke ulo oru ubochi, ha bu ndi na – ọ dịghị mma ma hụ onye ị ga-agba ọsọ; a ghaghị izere ha. Nke a bụ otu ozi ị ga-eburu n’ụlọ gị, ndị enyi gị, ndị enyi gị na ndị enyi gị iji chebe ha site na nhụjuanya nke ego ha na-akwụsi ike, “ka o kwuru.
Uduk jikwa oge ahụ gwa ndị na-achụ ego na SEC na-eduzi ụlọ ahịa ahịa niile n’inwe ego iji wepuga ndị niile na-ekere òkè na ọchịchị e-Dividend.
BUHARI CHORO N242B MAKA NTULI AKA NKE 2019
Dị ka ya si kwuo, ihe kacha mkpa nke usoro nchịkwa nke e-Dividend bụ iji kpochapụ ma ọ bụ belata ma ọ bụ belata nke nta nke ụkọ nke a na-azaghị. “Nkọwa a na-akwụghị ụgwọ bụ akụkụ na-adịghị mma nke isi ụlọ ahịa Naijiria nke na-agọnahụ ndị na-etinye ego na ndị na-eketa òkè na isi obodo. Ọ na-ekwu na akụ na ụba na-enweta ego buru ibu nke kwesịrị ịbịakwute ndị na-eketa ihe, ọ ga-abụkwa na mmanụ na-agagharị na mmanụ.
“Ọ bụ ihe si na mpempe akwụkwọ ndị dị n’ime akwụkwọ mkpebe akwụkwọ mkpepị dịka nzaghachị nke nzi ozi, mgbanwe na adreesị ndị na-etinye ego, ikwenyeghị ntụkwasị obi na ọdịda mmadụ na mmezigharị ịkwụ ụgwọ, n’etiti ndị ọzọ,” ka ọ gbakwụnyere. O kwukwara na ọchịchị e-Dividend na-agabiga njedebe ndị a site na ijide n’aka na a na-akwụnye ụgwọ nke na-erughị afọ iri na abụọ nke ụlọ ọrụ na-emefu ego mgbe nkwupụta nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ na n’ime oge akwụ ụgwọ kwadoro site na ịnyefe ọnụ ahịa interbank.
exchange iheneme IHENEME NOBODO ihenemenobodo Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST new news nobodo ponzi scheme sec security update